साउन २०, २०७४ शुक्रवार ११:४४:००
वेलिङटन– अहिले मोटोपन विश्वभर ठूलै संक्रामक रोगजस्तै भएको छ, जुन अस्वस्थ जीवनशैलीले निम्तिन्छ। मोटोपनले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुसम्बन्धी रोगहरू र क्यान्सरसम्म हुने जोखिम बढाउँछ। सन्तुलित भोजन र नियमित व्यायामलाई पुस्तौंदेखि स्वस्थ रहने र जीवनशैलीका कारण लाग्नसक्...
साउन १८, २०७४ बुधवार १६:०६:००
महिलाले जीवनमा थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक चुनौती पार गरेकी हुन्छिन् । यिनै चुनौतीमध्ये गर्भावस्था पनि एक हो । महिलाले आफ्नो कोखमा शिशुलाई हुर्काउने यो अवस्था निकै संवेदनशील मानिन्छ । यसैले यो अवधिमा गर्भवतीको रेखदेख र आहारविहारमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । खासगर...
साउन १६, २०७४ सोमवार २३:१६:२३
अनुहार चम्काउन सौन्दर्य प्रशाधनमा मानिसहरु हजारौं खर्च गर्छन् । व्युटी पार्लर धाउँछन् । तर कतिपय यस्ता सामाग्रीले कुरुप बनाएका थुप्रै उदाहरण पनि छन् । मापदण्ड भन्दा बढी केमिकल राखिएका सामाग्रीले रोगको शिकार पनि बनाएका छन् । तर साइडइफेक्ट नहुने र घरमै सहजै पाइने तरि...
साउन १४, २०७४ शनिवार ११:४४:००
खानपान र हाम्रो स्वास्थ्यबीच निकै नजिकको साइनो छ। शरीर सञ्चालन गर्न खाइने यही खानेकुराले हामीलाई पोषण दिन्छ भने कहिलेकाहीँ बिरामी पनि बनाउँछ। हाम्रो स्वादे जिब्रोले चट्याकचुटुक र मसालेदार खानेकुरा खाने जीवनशैली जब बनाउँछ, समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो समा...
साउन १३, २०७४ शनिवार ०१:४४:००
लन्डन– अधिकांश महिलालाई गर्भावस्थामा कति खाने भन्ने जानकारी हुँदैन । बेलायतको नेसनल च्यारिटी पार्टनरसिपले गरेको एक सर्वेक्षणमा यस्तो निष्कर्ष निस्किएको छ। सर्वेक्षणमा आमा बन्न लागेका महिलामध्ये ३३ प्रतिशतलाई मात्र गर्भावस्थामा खानेकुरा कति खाने जानकारी रहेको पत्ता लागेक...
टाइगर श्राफको फिट रहने फर्मुला
साउन ६, २०७४ शुक्रवार १६:२३:००
टाइगरर श्राफले फिटनेशका मामलामा बलिउडका सबै हिरोलाई पछि छोडिदिएका छन् । उनको फिट र लचकदार ज्यानका फ्यान थुप्रै छन् । बलिउड हिरोइनले सबैभन्दा फिट हिरोका रुपमा उनको नाम लिन थालिसकेका छन् । बलिउडमा इन्ट्री मारेपछि फिटनेशमा उनले अझ धेरै मेहनत गरेका छन् । फिट रहनका...
साउन ४, २०७४ बिहिवार ००:५७:००
सलमानको फिटनेश फर्मुला
साउन ३, २०७४ मगलवार १४:३४:५३
बलिउडमा बलिष्ठ ज्यान भएका सबैभन्दा ह्यान्डसम अभिनेतामा गनिन्छन्, सलमान खान । बाइसेप्स, ट्राइसेप्स र एब्सको सदाबहार भव्य साइजमा उनलाई बलिउडका अन्य अभिनेताभन्दा माथि मानिन्छ। शरीरको स्याहारसम्भारमा सलमानले विशेष ध्यान दिने गरेका छन् । उनी हरेक दिन व्यायाम र जिम ग...
साउन २, २०७४ सोमवार ११:४४:००
हालै गरिएको एउटा अनुसन्धानले दिनमा तीनपल्ट कफी पिउनाले तपाईंको आयु लम्बिन सक्ने परिणाम देखाएको छ। युरोपका १० देशका ३५ वर्ष माथिका करिब ५ लाख मानिसमा अनुसन्धान गरिएको थियो। ‘एनल्स अफ इन्टर्नल मेडिसिन’ जर्नलमा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानका अनुसार एक कप थप ...
असार २७, २०७४ मगलवार २१:११:००
न्युयोर्क– न्युयोर्क विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिसिनका माइक्रोबायोलोजिस्ट फिलिप टियर्नोको भनाइमा भिजेको (नुहाएर जिउ पुछेको) तौलिया एउटा जीवित ‘अग्र्यानिज्म’हो। यस्तो, तौलियामा जीवाणू हुर्कन र वृद्धिका लागि चाहिने उपयुक्त वातावरण (जस्तोः पानी,...
असार २६, २०७४ सोमवार २३:०८:४७
लन्डन– रोबटबारे लेख्ने एक जना लेखकले आफ्नो रिपोर्टमा भनेका छन्, ‘बालबालिकाजस्ता देखिने सेक्स रोबट आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।’ प्रोफेसर नोएल सार्की एउटा समाजका रुपमा हामीले सबैखाले सेक्स रोबटबाट पर्ने असरसम्बन्धमा गहिरो सोचविचार गर्नु आवश्यक छ भन्छन्...
असार १९, २०७४ सोमवार १३:४४:००
१. आयुर्वेदका अनुसार तामाको भाँडामा पानी खानाले तीनैवटा दोष (वात, कफ र पित्त) लाई सन्तुलित पार्ने क्षमता हुन्छ । तामाको भाँडामा राखिएको पानीलाई ‘ताम्रजल’ भनिन्छ । यसका लागि तामाको भाँडामा कम्तीमा ८ घण्टा राख्नुपर्छ । २. तामाको भाँडामा पानी राख्नाले त...
असार १९, २०७४ सोमवार १२:१४:००
कालेस्टेरोल रगतमा पाइने एक प्रकारको बोसो हो । रगतमा बोसोको मात्रा सामान्य भन्दा बढि भएमा सो बोसो रगतको नलिको भित्तामा बसेर नलिलाई साघुरो बनाउछ, जसले रक्तप्रवाहमा कमी हुनसक्छ । उच्च कालेस्टेरोलले मुटुको रक्तनली (कोरोनरी आर्टरी) साँघुरो भएर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ ...
असार १८, २०७४ सोमवार ०२:४४:००
उखानै छ– चिन्ताले चितामा पुर्या‍उँछ । यद्यपि, चिन्ता आफैँमा रोग होइन । तर, यसले थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक रोगलाई जन्म दिने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि यो घातक मानिन्छ । डिप्रेसन निम्त्याउँछ चिन्ता र तनाव कम गर्न अथवा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले...
असार १८, २०७४ आइतवार १७:०७:२३
एजेन्सी – हत्केला शरिरको संवेदनशील अंगमध्ये एक हो । यो सबै भन्दा बढी प्रयोग वा उपयोगमा आउने अंग हो । त्यसैले हत्केला चिलायो भने यसले हाम्रो दैनिक गतिविधिलाई नै प्रभावित पार्छ । हत्केला चिलाउने समस्यालाई पैसा प्राप्त गर्ने वा गुम्ने परम्परागत मान्यतायसँग पनि ज...
असार १८, २०७४ आइतवार १२:४४:००
मानिसले खाएको खाना शरीरभित्र ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छ । मानव शरीरको प्रमुख शक्तिको स्रोत ग्लुकोज हो । शक्ति शरीरभित्र रहेका सेल्स (कोशिकाहरु) भित्र हुन्छ । ग्लुकोजलाई रगतबाट कोशिकाभित्र प्रवेश गराउने काम इन्सुलिन नामक हर्मोनले गर्छ । इन्सुलिन पेटको प्यान्क्रियाज भन्ने ग्रन्थीले...
असार १७, २०७४ आइतवार ०२:४४:००
काममा सक्रियः धेरैमा डिप्रेसनको साझा कारण पर्याप्त रुची वा गतिबिधिको अभाव हो । जतिखेर पनि दिक्क मान्ने गर्नाले डिप्रेसन बढ्दै जान्छ । शारिरक स्वास्थ्य जस्तै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि रुची बढाउनु र विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले आत्मसम्मान र खुशी ...
निरोगी बन्ने १२ तरिका
असार १७, २०७४ शनिवार २३:४४:००
स्वास्थ्य नै सम्पत्ति हो । त्यसैले अन्य कुरामा भन्दा पहिले स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि केही त्याग र केही नियमको पालना अनिवार्य हुन्छ । तर, रोगी भएपछि पछुताउने हामीहरु निरोगी बन्न सामान्य व्यवहार अपनाउदैनौं । खासगरी उचित खानपिन र स्वस्थ जीवनशैलीले मात्रै जीव...
डिप्रेसन निको पार्न स्मृति–ध्यान
असार १७, २०७४ शनिवार १३:४४:००
विहान उठेदेखि राती ननिदाउँदासम्म हामी जुन–जुन काम, क्रिया गर्छौं, ती सबै स्मृतिपूर्वक गर्नुपर्छ, यसबाट धेरै राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि हामी बिहान उठेर दाँत माझ्छौं, बस्छौं, उठ्छौं, उभिन्छौं, हिड्छौं, खानेकुरा बनाउछौ, खाना खान्छौ, कुराकानी गर्छौ र बेला–बेलामा आँखा खो...
आमा बने पनि फिट हलिउडकी सुन्दरी नायिका स्कारलेट
असार १०, २०७४ शनिवार १५:४१:००
एजेन्सी- हलिउडकी सर्वाधिक सुन्दरी नायिकाको सुचिमा उत्कृष्ट १० भित्र पर्छिन स्कारलेट जोहनसन। स्वास्थ्यप्रति निकै सचेत स्कारलेटले आमा बनेको केही महिनामा नै आफ्नो शरिरलाई पुरानै अवस्थाको जस्तो बोल्ड एन्ड सेक्सी बनाउन सफल भएकी थिइन्। उनले सार्वजनिक रुपमै भनेकी थिइन् ‘फ...